မြန်မာလူငယ် နည်းပြဆရာ ကျန်းမာရေးပိုပြီး ထိခိုက်လာနေ.. ဂူတွင်း အောက်ဆီဂျင် လျေ့ာကျမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးများ အချိန်လုလုပ်နေရ...
နည်းပြဆရာမြန်မာလူငယ်လေး ကျန်းမာရေးပိုပြီး ထိခိုက်လာနေတယ်
နည်းပြဆရာမြန်မာလူငယ်လေး ကျန်းမာရေးပိုပြီး ထိခိုက်လာနေတယ် !!! စိတ်မကောင်းပါ ။
သူတို့ အားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်ထွက်လာနိုင်ဖို့ ကံတရားကိုသာအားကိုး ယုံကြည်နေမိတော့တာပဲ !!
လိုဏ်ဂူတွင်း အောက်ဆီဂျင် လျေ့ာကျမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများ အချိန်လုလုပ်နေရ
ထမ့်လွန်လိုဏ်ဂူအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ လျော့ကျမှုကြောင့် လူငယ်ဘောလုံးသမား ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းတွေဟာ အချိန်လုပြီး အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
ထိုင်းရေတပ်က ရေငုပ်သမားဟောင်းတဦး သေဆုံးပြီး လိုဏ်ဂူအတွင်း အောက်ဆီ၈ျင် ပမာဏ လျော့ကျနေတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေအဖို့ ဖိအားတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။
ရေငုပ်သမားဟောင်း သေဆုံးမှုဟာ လူငယ်တွေကို ရေငုပ်ခိုင်းပြီး အပြင်ကို ကယ်ထုတ်မယ့် ကိစ္စအပေါ် သံသယတွေ တိုးပွားစေပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဗျူဟာပြောင်းမှာပါ။ မူလအစီအစဉ်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ တဆင့်ပြီးတဆင့် ကလေးတွေကို ကယ်ထုတ်မယ့် အစီအစဉ်ပါ။ ဒါပေ့မယ့် အောက်ဆီ၈ျင်ပမာဏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းရင် ကလေးတွေအဖို့ အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်။ ဒီတော့ တခြားနည်းလမ်းတွေ ရွေးဖို့လိုတယ်။ သူတို့ကို ဂူထဲမှာပဲ တခြားဘေးကင်းတဲ့ နေရာကို ရွှေ့မလား။ ဒါမှမဟုတ် အန္တရာယ်တွေ ကြားထဲကနေ ဒီအတိုင်း ခေါ်ထုတ်မလား” လို့ တရုတ်ကယ်ဆယ်ရေး ခေါင်းဆောင် ဝမ်ယင်ကျီကပြောခဲ့ပါတယ်။
အောက်ဆီဂျင် ပမာဏလျော့နည်းချိန် နောက်ဆုံးပြုလုပ်မယ့် အရေးပေါ် ပြောင်းရွှေ့ရေး အစီအစဉ်ဟာ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်း တရုတ်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ ၅ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိတဲ့ ပိုက်ကို သွယ်တန်းပြီး အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ ဖိုင်ဘာအော့တစ် ကေဘယ်ကြိုးကိုလည်း သွယ်တန်းနေပါတယ်။
နညျးပွဆရာမွနျမာလူငယျလေး ကနျြးမာရေးပိုပွီး ထိခိုကျလာနတေယျ
နညျးပွဆရာမွနျမာလူငယျလေး ကနျြးမာရေးပိုပွီး ထိခိုကျလာနတေယျ !!! စိတျမကောငျးပါ ။
သူတို့ အားလုံး အမွနျဆုံး ပွနျထှကျလာနိုငျဖို့ ကံတရားကိုသာအားကိုး ယုံကွညျနမေိတော့တာပဲ !!
လိုဏျဂူတှငျး အောကျဆီဂငျြ လြေ့ာကမြှုကွောငျ့ ကယျဆယျရေးဝနျထမျးမြား အခြိနျလုလုပျနရေ
ထမျ့လှနျလိုဏျဂူအတှငျး အောကျဆီဂငျြပမာဏ လြော့ကမြှုကွောငျ့ လူငယျဘောလုံးသမား ကယျဆယျရေး ဝနျထမျးတှဟော အခြိနျလုပွီး အလုပျလုပျနကွေပါတယျ။
ထိုငျးရတေပျက ရငေုပျသမားဟောငျးတဦး သဆေုံးပွီး လိုဏျဂူအတှငျး အောကျဆီ၈ငျြ ပမာဏ လြော့ကနြတောကွောငျ့ ကယျဆယျရေးသမားတှအေဖို့ ဖိအားတှေ မွငျ့တကျနပေါတယျ။
ရငေုပျသမားဟောငျး သဆေုံးမှုဟာ လူငယျတှကေို ရငေုပျခိုငျးပွီး အပွငျကို ကယျထုတျမယျ့ ကိစ်စအပျေါ သံသယတှေ တိုးပှားစပေါတယျ။
“ကနြျောတို့ ဗြူဟာပွောငျးမှာပါ။ မူလအစီအစဉျက ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှေ တဆငျ့ပွီးတဆငျ့ ကလေးတှကေို ကယျထုတျမယျ့ အစီအစဉျပါ။ ဒါပေ့မယျ့ အောကျဆီ၈ငျြပမာဏ ၁၃ ရာခိုငျနှုနျးထကျနညျးရငျ ကလေးတှအေဖို့ အသကျအန်တရာယျ ရှိနိုငျတယျ။ ဒီတော့ တခွားနညျးလမျးတှေ ရှေးဖို့လိုတယျ။ သူတို့ကို ဂူထဲမှာပဲ တခွားဘေးကငျးတဲ့ နရောကို ရှမေ့လား။ ဒါမှမဟုတျ အန်တရာယျတှေ ကွားထဲကနေ ဒီအတိုငျး ချေါထုတျမလား” လို့ တရုတျကယျဆယျရေး ခေါငျးဆောငျ ဝမျယငျကြီကပွောခဲ့ပါတယျ။
အောကျဆီဂငျြ ပမာဏလြော့နညျးခြိနျ နောကျဆုံးပွုလုပျမယျ့ အရေးပျေါ ပွောငျးရှရေ့ေး အစီအစဉျဟာ အန်တရာယျရှိတယျလို့လညျး တရုတျကယျဆယျရေး အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျက ဖွညျ့စှကျပွောကွားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ထိုငျးအာဏာပိုငျတှဟော ၅ ကီလိုမီတာ အရှညျရှိတဲ့ ပိုကျကို သှယျတနျးပွီး အောကျဆီဂငျြထောကျပံ့ရေး လုပျဆောငျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကလေးတှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှေ ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျဖို့ ဖိုငျဘာအော့တဈ ကဘေယျကွိုးကိုလညျး သှယျတနျးနပေါတယျ။